Guddoomiyaha G/Banaadir oo kulan iskugu yeeray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka – Hornafrik Media Network
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa shir guddoomiyay shir looga hadlayay amniga, kaasoo ay ka qeyb galeen maamulada degmooyinka iyo agaasimayaasha waaxyaha gobolka.
Shirkan ayaa xalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, iyadoo ugu horeyn looga hadlay barnaamijka loogu magac daray Bulsho-Bile oo ah barnaamij cusub oo loogu tala galay is dhex galka bulshada iyo dhiira gelinta hal abuurka bulshada caasimadda.
Waxaa kaloo shirka looga hadlay dardargelinta amniga magaalada Muqdisho iyo nadaafadda oo muddooyinkii u dambeeyay maamulka Gobolka Banaadir diiradda saaray, balse uu ka muuqdo dib u dhac weyn.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa warbixino ka dhageystay mas’uuliyiinta maamulka degmooyinka, isagoo kula dardaarmay inay dardargeliyaan ka shaqeynta horumarinta caasimadda, shacabkana loogu adeego si daacad ah oo cadaalad ku jirto.
Xaaf oo dalbaday in la joojiyo howlaha ka socda Dhuusamareeb, kuna baaqay gogol la isugu yimaado
Somalia oo noqotey dalka ugu musuq maasuqa badan caalamka sanadkii 2019-ka